Election Watchdog Calls For Probe Into CCC Kwekwe Rally Violence
The Election Resource Centre (ERC) has called on relevant authorities to investigate the violence against opposition supporters of the Citizens Coalition for Change (CCC) on Sunday in Kwekwe.
In a statement, the ERC said the police, the National Reconciliation and Peace Commission (NRPC), and the Zimbabwe Human Rights Commission (ZHRC) should establish what transpired and avert a degeneration of such violence in the future.
The ERC also urged the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) to be proactive rather than reactive to ensure free and fair elections as politically motivated attacks are on the increase countrywide.
It said politically-motivated violence and ZEC ‘s failure or lack of will to proactively act will worsen voter apathy in the country. Said ERC:
The Election Resource Centre (ERC) notes with grave concern the politically motivated violence targeting Citizen Coalition for Change supporters in Kwekwe on Sunday, 27 February 2022.“Acts of political violence are unacceptable in Zimbabwe’s democracy, and ERC calls on all political parties, state institutions.
Further ERC calls on the constitutional bodies responsible for justice to investigate and prosecute the instigators of violence. The ERC reminds political parties and their supporters that democracy is about multi parties and divergent views and to that end calls on all political parties to respect the democratic principles set out in the Constitution of Zimbabwe.
ERC applauded the Zimbabwe Republic Police (ZRP) for acting swiftly in arresting the accused persons.
ZRP reported the arrest of 16 people, mainly ZANU PF, card-carrying members following the Kwekwe violence that led to the death of a 35-year-old Mbonesi Ncube.
WHY ZEC IS SO SILENT ,,I WONDER WHY IT'S THEIR DUTY
Inda iye yawana vatsigiri, home and away!
am seeing a Floyd Mayweather
protest in Zimbabwe watch and see
ZANU PF the end is nigh
While we are at it let's not forget the violence perpetrated against CCC on Saturday in Gokwe
That is also unacceptable
Iwe munangarwa ne team yako munozvii tirei zvekuuraya vanhu kwenyu kuri kudii chaiko kana musingadiwi nevanhu hamudiwi fullstop. Zivai kt zvamuri kuita izvozvo you are decampaigning yourself imi magara musina vanhu . chamuri kutya chii kt chamisa aite ma rally ake freely andi munoziva kt munosvasvangwa motumira **** dzenyu kuuraya vanhu God is watching you. Munangarwa is like sauro akat aona atorerwa umambo na David akatanga kuvhimana naye kt amuuraye asi akamukonewa. Chamisa is David hapana zvamomuita ari kuzotonga